39 ka mid ah saraakiisha dambi baarista oo tababar loo sameynaya | Star FM
Home Wararka Kenya 39 ka mid ah saraakiisha dambi baarista oo tababar loo sameynaya
39 ka mid ah saraakiisha dambi baarista oo tababar loo sameynaya
Agaasime ku xigeenka waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da Mr. Joseph Ashimala ayaa si rasmi ah u furay tababar saddex cisho soconaya oo la siinaya 39 ka mid ah saraakiisha waaxdan.
Tababarka ayaa ku saabsan baaritaannada lagu sameeyo dhaqaalaha ku baxo tahriibinta muhaajiriinta.
Agaasime ku xigeenka DCI-da ayaa dhanka kale midowga Yurub uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee uu siiyo Kenya.
Waxaa uu xusay in ay tahay markii labaad 6 toddobaad ka dib oo la qabto tababar uu suurtageliyay midowga EU-da.
Mr. Gideon Kibunja oo ah agaasimaha waaxda dambi baarista dalka u qaabilsan dhinaca tababarada ayaa xubnaha ugu baaqay in ay ka faa’iidaystaan fursaddan ay u fidiyeen khuburo uu hor kacaya Frederick Bayard oo ah madaxa dhanka mashaariicda.
Previous articleBobi Wine oo ku baaqay dibadbaxyo nabadeed
Next articleDHAGEYSO:Ciidan tababar ku soo qaadanaya Turkiga oo laga sagootiyay Soomaaliya